AS အကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားများမေလ 2022 | Learn2ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါ
အကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစား 2022 - သင်ကြားမှု2ကုန်သွယ်မှု
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ပွဲစားထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ ပြနာမှာ၎င်းတို့အားလုံးသည်တရားဝင်မဟုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, လူတစ် ဦး လူဆိုးစာရင်းပွဲစားက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုတိုင်းတာလို့မရတဲ့ငွေပမာဏရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်၏အိမ်စာလုပ်ခြင်းအဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်စရာသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းသို့မဟုတ်အစိုးရ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကြောင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတရားစီရင်မှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပိုမိုမျှတပြီးပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင်ကွင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုနေရာကိုထိန်းညှိရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခရီးများ၌ ASIC လိုင်စင် (သြစတြေးလျ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်) ကိုင်ဆောင်သည့်ပွဲစားများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤလိုင်စင်သည် Forex ပွဲစားနေရာတွင်အထူးတွေ့ရသည်။
ဤစာမျက်နှာတွင် ASIC ပွဲစားများနှင့်သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုဖော်ပြသွားပါမည်။ ၎င်းတွင် ASIC လုပ်ဆောင်သည့်အရာနှင့်ဤကိုယ်ထည်ဖြင့်လိုင်စင်ချထားသောပွဲစားမ ၀ င်ခင်သတိထားရမည့်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်များပါ ၀ င်သည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ တွင်လက်လီကုန်သည်များအား၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသောအကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားများအကြောင်းဆွေးနွေးပါမည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ၁၉၉၁ မှစ၍ ASC (Australian Securities Commission) ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသော်လည်းဖြစ်သည်။ Wallis Inquiry သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ဘဏ္conditionsာရေးအခြေအနေများကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်သာမကယေဘုယျအားဖြင့်ဘဏ္conductာရေးဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအလုံးစုံပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြောင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် ASC သည်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့သိနေသော ASIC ဖြစ်လာသည်။ ဥပဒေပြုမှုအပြောင်းအလဲများသို့ရောက်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ဖောက်သည်များအားကာကွယ်ခြင်း၊ အပ်ငွေတန်ဖိုးနှင့်အာမခံကိုမိုက်ခရိုစကုပ်အောက်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှေ့သို့တက်။ နောက်ထပ်တိုးတက်သောပြုပြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် ASIC ပွဲစားများသည်သြစတြေးလျစတော့ဈေးကွက်တွင်မည်သို့လည်ပတ်နိုင်သည်ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ တင်းကျပ်သောစစ်ဆေးမှုများနှင့်ပွဲစားကုမ္ပဏီ၏ငွေစာရင်းများနှင့်ဖောက်သည်များ၏စောင့်ရှောက်မှုများကိုပုံမှန်ပြန်လည်စစ်ဆေးသည်။
အခြားသိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများကို MoneySmart (FIDO နှင့် Understanding Money အစားထိုးထားသော) အပါအ ၀ င်သြစတြေးလျဘဏ္sectorာရေးကဏ္to၌စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ MoneySmart သည်လူများအားဘက်မလိုက်သောအကြံဥာဏ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအခမဲ့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းအားပိုမိုကြီးမားသောပုံသဏ္ofာန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအကာအကွယ်ပေးသော်လည်းအနာဂတ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဏ္choicesာရေးရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်ကူညီခြင်း၊
ပွဲစားများသည် ASIC မှလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူကြသနည်း။
အဖြေမှာလွယ်ကူခြင်းမဟုတ်ပါ။ ASIC သည် FCA နှင့် CySEC ကဲ့သို့တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ကိုင်သည်။ စတင်ရန်ပွဲစားများအားလုံးသည် AFS (Australian Financial Securities) ထံမှတရားဝင်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် ASIC သည်သက်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာကိုအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
ASIC ပွဲစားများအားလုံးသည်ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုတရားဝင်မကမ်းလှမ်းမီအတည်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်ပွဲစားသည် 'ကော်ပိုရိတ်အက်ဥပဒေ ၂၀၀၁' အရ AFS လိုင်စင်၏အခြေအနေတစ်ခုစီကိုလိုက်နာရမည်။
ထို့နောက် AFS နှင့် ASIC သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီ၏ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းကိုပုံမှန်အကဲဖြတ်သည်။ ၎င်းတွင်ပလက်ဖောင်း၏ဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးအစီအစဉ်နှင့်အခြားမက်ထရစ်များစသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပါဝင်သည်။
လိုင်စင်ရရှိရန်အလားအလာရှိသော ASIC ပွဲစားအတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားပါသည်။
၎င်းသည်သိသာထင်ရှားပုံရသည်။ သို့သော် ASIC ပွဲစားများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သို့အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုများကိုအသေးစိတ်တင်ပြရန်ဥပဒေအရလိုအပ်သည်။ နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးအပြင်ဤစစ်ဆေးမှုများတွင်ဘဏ္financialာရေးပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏအသေးစိတ်အသေးစိတ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၊ အနားသတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတန်းအစားပိုင်ဆိုင်မှုများ၏လည်ပတ်မှုတို့ပါ ၀ င်ရမည်။
ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်အခကြေးငွေတွက်ချက်မှုအထောက်အထားများနှင့်ငွေစာရင်းများတွင်အသုံးပြုသောသြဇာသက်ရောက်မှုများအသေးစိတ်ပါ ၀ င်ရမည်။ ထို့အပြင်ထွက်ကုန်များအားလုံးပါဝင်သောစာရင်းစစ်နှင့်၎င်းတို့အားမည်သူလုပ်ဆောင်သည်ကိုစစ်ဆေးခြင်း။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ပွဲစားသည်ဖောက်သည်များကိုယ်တိုင်မည်သည့်အမိန့်ကိုမည်သည့်အမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြောင်းနှင့်ပွဲစားကုမ္ပဏီမှမည်သည့်အမိန့်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ကိုဆိုလိုသည်။
ASIC သည်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသောစာရွက်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးနေသောမည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကိုမဆိုဒဏ်ငွေချမှတ်ရန်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားခြင်းထက်ပိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ASIC ပွဲစားများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမဟုတ်ကြောင်းစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အရေးအပါဆုံး, ASIC ရှိပါတယ် အလွန် မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများ။
ဘဏ္sectorာရေးကဏ္atingကိုထိန်းညှိရန်ကော်မရှင်ရှိသောမည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုရန်ပုံငွေခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤငွေကြေးဆိုင်ရာဖောက်သည်များ၏အကာအကွယ်သည်ပွဲစားများအတွက်သီးသန့်မဟုတ်ပါ။
အခြေခံအားဖြင့် ASIC ပွဲစားများအားလုံးသည်သင်၏ငွေစာရင်းအားကုမ္ပဏီ၏ငွေနှင့်အခြားအကောင့်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားရန်တရားဝင်တာဝန်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုမ္ပဏီသည်ဒေဝါလီခံခြင်းသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုများ၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်၏ငွေသည်လုံခြုံစိတ်ချရသည်။
သင်၏ငွေကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာထားရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ASIC ပွဲစားများသည်အဆင့် (၁) ဘဏ်များနှင့်သာတွဲဖက်ရန်အကြံပေးသည် (ဆိုလိုသည်မှာကြီးမားသောအရင်းအနှီးများသောဘဏ်များ) ။ ထို့အပြင်သင်၏အကောင့်ရန်ပုံငွေကိုကိုင်ဆောင်ထားသော Tier-1 ဘဏ်သည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုပွဲစားနှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိစေရ။
တစ်ခါတစ်ရံ 'စွန့်စားမှုဖော်ထုတ်ခြင်း' ဟုခေါ်သည်၊ သင်၏ ASIC ပွဲစားသည်ကုမ္ပဏီမှပေးရမည့်မည်သည့်အခကြေးငွေကိုမဆိုအပြည့်အဝထုတ်ဖော်ရန်ဥပဒေအရလိုအပ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာသင်၏အကောင့်ကိုတစ်လအသုံးမပြုပါကအသေးစိတ်ကျသောကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မလှုပ်မရှားသောအခကြေးငွေများဖြစ်နိုင်သည်။
CFDs များသို့ညအိပ်ရန်ငွေအပါအဝင်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုမဆိုသင်သတိပြုသင့်သည်။ ASIC ပွဲစားများအားလုံးသည်နေအောက်ရှိအခကြေးငွေအားလုံးကိုမယူဆောင်ရသေးသော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေပံ့ပိုးသူသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အပြည့်အဝပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်။
သင်၏နားလည်မှုအတည်ပြုချက်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖတ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံ 'ဖောက်သည်အတည်ပြုမှုပုံစံ' ဟုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်ကြာရှည်ခြင်းနှင့်တိုတောင်းခြင်းတို့သည်ဥပဒေအရ ASIC ပွဲစားသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခကြေးငွေများအားလုံးကိုထုတ်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။
စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောပြည်တွင်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ASIC ပွဲစားများအတွက်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေနောက်ထပ်ပြဌာန်းစံဖြစ်ပါတယ်။
ASIC စံနှုန်းများအရလိုင်စင်ရပွဲစားများသည်ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ်အကောင့်တွင်အနည်းဆုံးသြစတြေးလျဒေါ်လာ ၁ သန်းရှိရမည်။ အများပြည်သူအတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများမပေးခင်ဤကိစ္စသည်လိုအပ်သည်။
သြစတြေးလျ AML / CTF အက်ဥပဒေ
AML သည်“ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး” အတွက်တိုတောင်းပြီး CFT သည်“ အကြမ်းဖက်မှု၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး” ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် ASIC ပွဲစားများအတွက်နောက်ထပ်စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် AML / CTF ဌာနသည်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေ၊ ငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ ဘဏ္fraudာရေးလိမ်လည်မှု၊ အထောက်အထားခိုးယူမှုနှင့်အခြားမေးမြန်းစရာရာဇ ၀ တ်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ASIC ပွဲစားများသည် 'သင်၏ဝယ်သူကိုသိရန်' အတိုကောက်ဖြစ်သော KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသက်သေပြဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်။
KYC တွင်သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံနှင့်အိမ်လိပ်စာ၊ ပတ်စ်ပို့ (သို့) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ လစဉ်လစာနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံတို့ဖြင့်ဓာတ်ပုံမှတ်ပုံတင်သည့်ပွဲစားတစ် ဦး ပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ဤလုပ်ငန်းကိုဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်လုပ်ဆောင်ရမည်။
FCA နှင့် CySEC ပွဲစားများအတွက်လည်းအလားတူပင်။ တကယ်တော့, ဒီစံဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, မည်သည့်လိုင်စင်ရ ASIC ပွဲစားသည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဖြတ်သန်းခြင်းမပြုဘဲသင့်ကိုလက်မှတ်ထိုးမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဓာတ်ပုံ ID မပါသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်သို့စာရင်းသွင်းရန်ခွင့်ပြုပါကကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းသည်အလံနီဖြစ်သင့်သည်။
ASIC ပွဲစားသည်ဖောက်သည်ကိုသံသယဖြစ်လာသည်ဆိုပါစို့။ ဥပမာတစ်ခုပေးဖို့၊ ၀ ယ်သူသည်တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာခန့်အပ်နှံသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ဒေါ်လာ ၂၀ka လကိုစတင်ထည့် ၀ င်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်ရှိနိုင်သော်လည်းပွဲစားသည်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုtheစတြေးလျ AML / CTF အစိုးရထံသို့သတင်းပို့ရမည်။
ခိုင်မာသောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာကိုပွဲစားကုမ္ပဏီ၏မူဘောင်တွင်ထည့်သွင်းရမည်။ ASIC ပွဲစားများသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံမှမကြာခဏစစ်ဆေးခြင်းခံရပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အုပ်ထိန်းသူများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းလမ်းကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပါက ASIC ပွဲစားများသည်တရားဝင်အစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မရပ်တန့်ပါ။ ထို့အပြင်ပွဲစားသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဖြတ်သန်းရမည်။ ၎င်းတွင်ငွေသည်မည်သည့်နေရာမှဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်စုံစမ်းရေးတွေ့ရှိချက်များအားလုံးပါ ၀ င်သည့်ရှင်းလင်းသောတရား ၀ င်လုံ့လဝီရိယရှိသည့်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ASIC သည်ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်တားဆီးရန်အတွက်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးနှင့်အတူအကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားများသည်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မရှင်၏ကျေနပ်အားရမှုအတွက်“ သုံးစွဲသူစွန့်စားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ” ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သင့်သည်။
ပထမအချက်အနေဖြင့်စည်းမျဉ်းလမ်းညွှန် '181 'အရ ASIC ပွဲစားများသည်အကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခဖြစ်နိုင်သည့်မည်သည့်ဖောက်သည်နှင့်မျှမဆက်ဆံသင့်ပါ။ အကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခဖြစ်ပါကပွဲစားများသည်ပconflictိပက္ခစီမံခန့်ခွဲမှု၏သက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြရမည်။
ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိပconflictိပက္ခစီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကိုပေးခြင်းအားဖြင့်လိုင်စင်ရသူသည်သူတို့၏ဘဏ္standingာရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်သမာဓိကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပconflictsိပက္ခများနှင့်ဆိုင်သောအယူအဆမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပanyိပက္ခများကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ ရှောင်ရန်နှင့်ထုတ်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အမှန်တကယ်ကာကွယ်ပေးသည်။ ပထမ ဦး စွာနှင့်အဓိကအားဖြင့် - သင်၏ငွေကိုသင်ယုံကြည်သော ASIC ပွဲစားသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ယုံကြည်မှုကိုသာမကဘဏ္spaceာရေးကဏ္ confidence အပေါ်ယုံကြည်မှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ASIC သည်ကုန်သည်များကိုစျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုများမှကာကွယ်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသလို၊ MoneySmart ကဲ့သို့သောဘဏ္educationာရေးပညာပေးအစီအစဉ်များ (အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း) သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသူတို့၏အရင်းအနှီးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီသည်။
ဖျက်သိမ်းသည့်ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင် ASIC တွင်လျော်ကြေးပေးခြင်းအစီအစဉ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်“ ပျောက်ဆုံးသော” မည်သည့်ငွေကိုမဆို ၀ င်ရောက်ရယူနိုင်သည်။ တကယ်တော့ဒီအဖွဲ့သည်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေများပြenfor္ဌာန်းရန်လာသောအခါသူ့ဟာသူကတိကဝတ်ပြုသည်။
ASIC ပွဲစားနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ကံဆိုးသောဖြစ်ရပ်တွင် ASIC ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကော်မရှင်သည်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်အစီရင်ခံစာကိုမဆိုလိုက်နာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ASIC ပွဲစားများ - ကုန်ပစ္စည်းများ
အနည်းငယ်သောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုသာပေးသောပလက်ဖောင်းအချို့ရှိပါသည်။ ထို့နောက် ASIC ပွဲစားများသည်နေအောက်ရှိပစ္စည်းအားလုံးကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပလက်ဖောင်းသည်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ သင်မည်သည့်ပစ္စည်းများကိုသင်ရောင်းဝယ်မည်ကိုမသေချာသေးပါကအကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားများကကမ်းလှမ်းလေ့ရှိသောမကြာခဏတွေ့ရသောတူရိယာများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားပါသည်။
CFDs များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော် ASIC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရလက်လီဖောက်သည်များလက်လှမ်းမီမှုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကန့်သတ်ချက်များသည်သြဇာသက်ရောက်မှုများနှင့်စျေးကွက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်အရာရှိများသည်လက်လီဖောက်သည်အမြောက်အများသည် CFD ရာထူးများကိုပွဲစားများကမတရားစွာရပ်တန့်ထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤပြောင်းလဲမှုများသည်အကောင်အထည်ပေါ်မလာသေးသဖြင့်ဤအရာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ CFD များသည် ASIC ပွဲစားနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပါမည်။
သင်သတိပြုမိနိုင်သည့်အတိုင်း CFD များသည်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာအမျိုးမျိုး၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်သင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်စတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် Forex အားလုံးအတွက်ခန့်မှန်းရန်ရွေးချယ်လိမ့်မယ်။ သင်စျေးကွက်ပေါက်စျေးကျဆင်းနေသည်ဟုထင်လျှင်သင် 'ရောင်း' သို့မဟုတ် 'တိုတိုသွား' လိမ့်မည်။ သင်စျေးကွက်ပေါက်စျေးတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသင်ခံစားမိပါကသင်သည် '၀ ယ်' သို့မဟုတ် 'ရှည်စွာသွား' လိမ့်မည်။
CFDs များအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါသင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်တိုင်ကိုသင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ CFD သည်အစားထိုးကိရိယာ၏အချိန်မှန်စျေးနှုန်းကိုခြေရာခံရန်တာဝန်ပေးထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Nike စတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းသည် ၁.၂၅% တိုးလာပါက CFD ကဲ့သို့ပင်။ အရေးကြီးသည်မှာ CFD များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုသည်မှာသင်သည် 'တိုတိုသွားခြင်း' မှအကျိုးအမြတ်များရရှိရန်အလားအလာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ နှင့် 'ရှည်လျားသွား' ။
ASIC ပွဲစားများစွာနှင့် CFDs များအတွက်မည်သည့်ကော်မရှင်အခကြေးငွေကိုသင်ပေးစရာမလိုပါ။ ပလက်ဖောင်းပေါ် မူတည်၍ CFDs ကသင့်ကိုအလွန် Ultra အရည်ကိုသုံးနိုင်သည် Forex ဈေးကွက်။ ရှယ်ယာများ, ရွှေ, ရေနံ, အညွှန်းကိန်း, cryptocurrencies နှင့်ပိုပြီးမဖော်ပြရန်မ!
Forex ပွဲစားများသည်လိုင်စင်ရရှိရန် ASIC သို့မဟုတ် FCA ကိုရှာဖွေကြသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် Forex ကိုမရောင်းခင်သင့်မှာပွဲစားတစ်ယောက်ရှိရမယ်။ သင့်ကိုယ်စားငွေပေးချေရန်ပွဲစားမပါဘဲ၊ သင်သည်ကမ္ဘာ့ငွေကြေးစျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။
အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် 'ထူးခြားချက်'၊ 'minors' နှင့် 'majors' ဖြစ်သည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်ဥပမာအချို့ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ထူးခြားဆန်းပြားငွေလဲလှယ်နှုန်း - GBP / ZAR, EUR / TRY, USD / THB, JPY / NOK, AUD / MXN
အသေးစားငွေကြေးпарများ - EUR / AUD, EUR / GBP, CHF / JPY, NYZ / JPY, GBP / CAD
အဓိကငွေကြေးအတွဲများ - GBP / USD, EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF
Forex အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန် ASIC ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ငွေကြေးအတွဲများကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ဖွင့်သည်။
FX နှင့်ပတ်သက်လျှင်၊ သင်ကလက်ဆွဲကုန်သည်ဖြစ်လိုလျှင်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဘဏ္financialာရေးသတင်း၊ စျေးနှုန်းဇယားများ၊ နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုပေးသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ကုန်စည်ဈေးကွက်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုကို 'စွမ်းအင်'၊ 'သတ္တု' နှင့် 'စိုက်ပျိုးရေး' ဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏နမူနာအချို့ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန: ရေနံစိမ်း၊ ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတ်ဆီနှင့်ရေနံစသည်တို့ဖြစ်သည်
သတ္တုများ: အလူမီနီယံ၊ ငွေ၊ ပယ်လေဒီယမ်၊ ရွှေ၊ ပလက်တီနမ်နှင့်ကြေးနီစသည်တို့ဖြစ်သည်
စိုက်ပျိုးရေး ဂျုံ၊ ဂျုံ၊ သိုးမွှေး၊ ပဲများ၊ ဆန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
သူတို့၏ဘ ၀ တွင်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ခြင်းကိုတစ်ခါမျှမလုပ်ဖူးသူများပင်ရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများအကြောင်းကိုကြားခဲ့ရသည်။ အခုတော့အများအားဖြင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလုပ်နေကြပြီ။ အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားကော်ပိုရေးရှင်းများတွင်အစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည် (ဥပမာ - British American Tobacco, HSBC, Amazon) ။
အဆိုပါတောင်းခံနှင့်လေလံ 'ပျံ့နှံ့'' ဒီပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားမှာရောင်းသူကရောင်းဖို့လက်ခံချင်တာနဲ့ဝယ်သူကပေးချင်တာနဲ့ကွာခြားတာကိုပြတယ်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားသည် LSE (လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း) မှတစ်ဆင့်ရှယ်ယာများရောင်းရန်သာမကသင်၏ငွေကိုပြည်ပရှိကုမ္ပဏီများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဥပမာ Adidas ဟုခေါ်သောရှယ်ယာတစ်ခုလုံးကိုသင်မဝယ်လိုပါကအချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားအစုရှယ်ယာအချို့ကိုသာဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ASIC ရှယ်ယာပွဲစားများကိုတွေ့ရလေ့သုံးမျိုးရှိပြီး၎င်းတို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
လိုသလို: ဤပွဲစားသည်သင့်ကိုယ်စားရောင်းဝယ်လိမ့်မည်၊ သို့မှသာသင်သည်လက်ချောင်းမချရ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ယူသည်။
execution: ကွပ်မျက်ရေးပွဲစားတစ် ဦး သည်သင်သူတို့ကိုသင်ကြားရန်ညွှန်ကြားသောအခါမှာယူမှုများကိုသာပြုလုပ်သည်။
အကြံပေး: သင်လမ်းညွှန်အနည်းငယ်လိုသော်လည်းလုံးဝ passive trading လုပ်ငန်းကိုမလိုချင်ပါကအကြံပေးပွဲစားသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်မည်သည့်ရှယ်ယာသည်မည်သည့်အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်သည်ကိုပွဲစားကသင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ASIC ပွဲစားသည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းကိုသာပြုလုပ်လိမ့်မည်။
စျေးကွက်တွင် cryptocurrencies အမျိုးအစားပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးကိုစာရင်းပြုစုရန်လက်တွေ့ကျမည်မဟုတ်ချေ။ ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့် ASIC ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကပုံမှန်အားဖြင့်တည်ခင်း cry ည့်ခံသည့် cryptocurrencies စာရင်းကိုသင်အောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
Binance အကြွေစေ့ (BNB)
cryptocurrencies နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ASIC ပွဲစားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် demo account အားအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်သည်။ အမှန်တကယ်လဲလှယ်ရေးတွင်သင်သရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးမပြုနိူင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်အစစ်အမှန်ငွေကိုအသုံးမပြုမီလက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ညွှန်းကိန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ညွှန်းကိန်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ သင်သည်အညွှန်းတစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ ညွှန်းကိန်းများသည်ငွေလဲလှယ်နှုန်းတစ်ခုတွင်စာရင်းတစ်ခုစီ၏စတော့မျိုးစုံစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကိုဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် FTSE 100 သည် London Stock Exchange ရှိအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အညွှန်းကိန်းအပေါ်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ် တိုင်းတာ အချက်များနှင့် ရွေ့လျား အချက်များအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်။ သင်သည်အညွှန်းကိုတိုက်ရိုက်မရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါ။ အဲဒီအစား CFDs, Futures or ETFs ကိုပေးတဲ့ ASIC ပွဲစားများကတဆင့်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်း၏ပထမခြေလှမ်းမှာ ASIC ကဲ့သို့လေးစားရသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကော်မရှင်ထံမှလိုင်စင်ရရှိထားသူဖြစ်သည်။ ပွဲစားပလက်ဖောင်းများသည်လိုင်စင်ကိုဂုဏ်ယူစွာပြသသောကြောင့်ကုမ္ပဏီအားမည်သူထိန်းချုပ်သည်ကိုရှာဖွေရန်သင့်တင့်စွာလုပ်ရန်မလိုပါ။
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားများနှင့်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောငွေများကိုသာယုံကြည်အားထားခြင်းအားဖြင့်သင်၏ငွေများကိုကုမ္ပဏီခွဲမှရန်ပုံငွေခွဲခြားထားခြင်း မှလွဲ၍ လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုသင်သိသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုသည်။
အွန်လိုင်းအာကာသတွင် ASIC ပွဲစားများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင် ASIC ပွဲစားသုတေသနကိုပြုလုပ်သည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်စာရင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားပါသည်။
လျောက်ပတ်သောကုန်သွယ်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိရန်အတွက်ပြန့်ပွားခြင်းသည်ကြီးမားသောခြားနားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ဒီဟာကပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရဲ့ ၀ ယ်ရောင်းဈေးနဲ့ကွာခြားချက်ပဲ။pips'' ။
ငွေစက္ကူ GPB / USD ၏ငွေကြေးအတွဲတွင်ပျံ့နှံ့မှုသည် pips ၆ ခုရှိသည်။ အမြတ်ရရန်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို pips ၆ ခုထက်ပိုပြီးမြှင့်တင်ရမည်။
၎င်းသည် ASIC ပွဲစားကောင်းတစ် ဦး ရွေးချယ်ရာတွင်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောပွဲစားပလက်ဖောင်းများသည်မည်သည့်ကောက်ခံရေးစရိတ်မျှမကောက်ယူဘဲပြန့်ပွားမှုမှသာငွေရှာသည်။ အခြားသူများကသင့်အား ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းချမှုတိုင်းအတွက်သင့်အားအခကြေးငွေပေးဆောင်နိုင်သည်။ ဒီအခကြေးငွေကိုသင်ဖောက်သည်တစ်ယောက်အနေနဲ့အမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားသင့်ပါတယ်။
သင် GBP / USD ကိုရောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့
သင်၏ပွဲစားသည်ကော်မရှင်ကြေး ၀.၆% ကျသင့်သည်။
သင်£ 2,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်
ASIC ပွဲစားသည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ပေါင် ၁၂ ပေါင်ယူသည်
နည်းပညာဆိုင်ရာ Tools များ
နည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာများသည် site တစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော် ASIC ပွဲစားများမှကမ်းလှမ်းသောအသုံးအဝင်ဆုံးညွှန်းကိန်းများကိုသင်စာရင်းပြုစုပြီးပါပြီ။
ပျမ်းမျှ directional အညွှန်းကိန်း (ADX)
Parabolic ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန် (SAR)
ရွေ့လျားပျှမ်းမျှ convergence မတူကွဲပြား (MACD)
အမြတ်အစွန်းကုန်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်ဤကိရိယာများကိုငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မဟာဗျူဟာကြီးတစ်ခုနှင့်တွဲဖက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါကဲ့သို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများဖြင့်သင်၏ခြေကိုရှာဖွေသည့်အခါသရုပ်ပြအကောင့်များသည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။
ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာခေတ်ရေစီးကြောင်းများမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သောနည်းပညာကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြကိရိယာများကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းသည်စျေးကွက်၏ ဦး တည်ရာကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ထို့အပြင်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ကိုသင်ကြိုးစားလိုပါကသင်၏ပွဲစားသည်တတိယပါတီဆော့ဖ်ဝဲကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ MT4. ASIC ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရာတွင်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာအမိန့်များသည်မည်မျှလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းဖြစ်သည်။ သင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏အမှာစာများသည်မီလီစက္ကန်များကဲ့သို့မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
သငျသညျရှေ့ဆက်နှင့် ASIC ပွဲစားမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီ, ပိုင်ဆိုင်မှုများရရှိနိုင်ပါကအဘယ်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်ပလက်ဖောင်းထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အကြံပြုလိုတယ်။ သငျသညျယခုကုန်သွယ်ပျော်မွေ့သောအရာကိုလိုင်းဆင်းနောက်ထပ်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုပိုမိုစုံလင်အောင်ပြုလုပ်လိုပါကသင့်တွင်ရွေးချယ်စရာပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအနည်းငယ်ထက်ပိုသောသင်သိထားသင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သာအာရုံစိုက်ရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွက်မည်သည့်ငွေကြေးအတွဲများရရှိနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားပလက်ဖောင်းအချို့သည်အရွယ်မရောက်သေးသူများ၊ ဗိုလ်ကြီးများနှင့်ထူးခြားသောထူးခြားချက်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်းအချို့သည်လက်တဆုပ်စာအနည်းငယ်သာကိုသာအာရုံစိုက်ကြသည်။
Forex ကုန်သည်အများစုကသင့်အားအစုရှယ်ယာတိုးချဲ့လိုပါကအကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားများသည်ရရှိနိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်ဟုသင့်အားပြောလိမ့်မည်။
ကောင်းမွန်သောပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုရွေးချယ်ရာတွင်ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံမှုသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာပွဲစား ၂၄/၇ ကိုသင်လိုအပ်လျှင်နှင့်လိုအပ်လျှင်ပံ့ပိုးမှုရရှိနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် Forex စသည့်စျေးကွက်များ ၂၄/၇ ဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့်စနေနေ့ညနေခင်းတွင်သင်အကူအညီလိုအပ်ပါကသင့်အားကူညီရန်သို့မဟုတ်အကြံပေးရန်ပတ် ၀ န်းကျင်မရှိခဲ့ပါကအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားများသည် ၂၄/၇ တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်းအထောက်အပံ့နှင့်အဆက်အသွယ်ပုံစံစသည့်အဆက်အသွယ်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
ASIC ပွဲစားတိုင်းသည်သိုက် / ငွေထုတ်ဌာန၌ကွဲပြားကြသည်။ အချို့သည်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအများစုကိုလက်ခံကောင်းလက်ခံနိုင်သော်လည်းအချို့သည်ရိုးရာဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကိုသာလက်ခံနိုင်သည်။
သင်အသုံးပြုလိုသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသင်စိတ်ထဲရှိပါကကုမ္ပဏီကလက်ခံကြောင်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ အများဆုံးတွေ့မြင်ရသည့်ငွေပေးချေမှုစနစ်မှာအကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲနှင့် Netteller, PayPal နှင့် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallets များဖြစ်သည်။
ငွေသွင်း / ထုတ်ယူခြင်းပရိုတိုကော
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုလက်ခံသည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ပြီဟုယူဆလျှင်ယခုသင်သည်အခြားမက်ထရစ်အချို့ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားသည်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေသွင်းခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါ။
ထို့အပြင်သင်ပလက်ဖောင်း၏ရုပ်သိမ်းရေးမူဝါဒကိုလည်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးအားဖြင့် ASIC ပွဲစားသည်မြန်မြန်မဟုတ်ပါက ၂ ရက်အတွင်း ၂ ရက်အတွင်းငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ဤသည်မှာမည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသင်အသုံးပြုသည်ဆိုသည့်အပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
အကောင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မတူညီတဲ့လူတွေအတွက်မတူညီတဲ့လေဖြတ်ခြင်း အရောင်းအ ၀ ယ်အကောင့်အမျိုးမျိုးကိုရရှိနိုင်သည့်အပြင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်သူတို့ပေးရမည့်အရာနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကအစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုနောက်လိုက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကအစ္စလာမ့်အကောင့်များကမ်းလှမ်းသည့် ASIC ပွဲစားကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ကုန်သည်များအနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ရှရီယာဥပဒေ (အကျိုးစီးပွားကိုပေးအပ်ခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားများရရှိခြင်းကို) ဆက်လက်၍ သစ္စာရှိစေရန်ဤအကောင့်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲထားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ပွဲစားသည်အစ္စလာမ့်အကောင့်များကိုအထူးမကြော်ငြာပါကစင်မြင့်သို့ဆက်သွယ်ခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာအချို့သော ASIC ပွဲစားများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စံသတ်မှတ်ထားသောအကောင့်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားတွင်ပုံမှန်အကောင့်တစ်ခုကိုလူသိများသည်။ သို့သော်အရင်းအနှီးအလွန်အမင်းမစွန့်စားလိုသောကုန်သည်များနှင့်ကုန်သည်များအတွက် 'Nano', 'Micro' နှင့် 'Mini' အကောင့်များရှိသည်။ သင်ဤကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းကိုကြိုးစားလိုပါကသင်စိတ်ဝင်စားသော ASIC ပွဲစားကိုဆက်သွယ်ပါ - သူတို့ကသင့်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် standard account တစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒီနေ့ ASIC ပွဲစားနဲ့ဘယ်လိုစာရင်းသွင်းရမလဲ
ဤအချက်အားဖြင့် ASIC သည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်ကိုမည်သို့ကာကွယ်ပေးသည်သာမကပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရမည်ကိုလည်းပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်မှုရှိလိမ့်မည်။ သင့်တော်သောပံ့ပိုးသူကိုသင်မတွေ့သေးပါက ၂၀၂၀ တွင်အကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားများစာရင်းကိုဤစာမျက်နှာတွင်ထပ်မံတွေ့ရှိရလိမ့်မည်။
သင်စတင်ရန်, ယနေ့ ASIC ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့စာရင်းသွင်းရန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်သင်ပြီးပြီ။
ပထမ ဦး စွာသင်ရွေးချယ်ထားသော ASIC ပွဲစား၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ ဦး တည်သွားရန်လိုအပ်သည်။ 'sign up' ခလုတ် / လင့်ခ်ကိုရှာပါ။
အဆင့် ၂ - သင်၏သုံးစွဲသူကိုခွဲခြားသိ / သိပါ (KYC)
ASIC ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများအရကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းပွဲစားများသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အထောက်အထားကိုရယူရန်ဥပဒေအရလိုအပ်သည်။
ပွဲစားများသည်သင်၏ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ (သို့) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လည်းလိုအပ်ပြီး၊ သင်၏အမည်နှင့်လိပ်စာပါသည့်တရားဝင်ငွေတောင်းခံလွှာတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည် (အများအားဖြင့်လွန်ခဲ့သည့် ၃ လအတွင်းမှသုံးစွဲမှုငွေတောင်းခံမှုသည်လုံလောက်လိမ့်မည်) ။ KYC ၏နောက်ထပ်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာသင်၏လစဉ်ဝင်ငွေ၊ လစာနှင့်တိုတောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသမိုင်း / အတွေ့အကြုံကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လှမ်း 3: အချို့သောရန်ပုံငွေများအပ်နှံ
ASIC ပွဲစားပလက်ဖောင်းများတွင်ရရှိနိုင်သည့်ငွေပေးချေမှုစနစ်များသည်များသောအားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Skrill နှင့် Neteller တို့ကဲ့သို့ E-wallets များ
သင်၏သိုက်ကိုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်သင်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုမရှိသေးပါကသရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းသည်။ ASIC ပွဲစားများသည်များသောအားဖြင့် $ 10,000 မှ $ 100,000 အကြားသရုပ်ပြငွေကိုပေးလေ့ရှိသည်။
2022 ၏အကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစား
ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားကိုရွေးချယ်သည့်အခါသတိထားရမည့်အရေးကြီးသောအရာများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးကွယ်ထားသည်။
အပြည့်အ ၀ လိုင်စင်ရပြီးဖြစ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်သင်၏ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကောင်းဆုံး ASIC ပွဲစားအချို့ကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှာပါ။
၃။ Avatrade - ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုမြောက်မြားစွာ
AvaTrade သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်တည်ထောင်ထားသောအခြား ASIC ပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်အတွေ့အကြုံအဆင့်အားလုံးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းတွင်၎င်း၏စာအုပ်များတွင်ဖောက်သည် ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီးထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်လစဉ်လတိုင်းကုန်သွယ်မှု ၂ သန်းခန့်ကိုကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည်။
ဤ ASIC ပွဲစားသည် MetaTrader4 / 5၊ Mirror trader နှင့် ZuluTrade ကဲ့သို့သော third-party platforms အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။ AvaTrade နှင့်စတင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သွင်းရုံသာလိုအပ်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် cryptocurrencies၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ရှယ်ယာများ၊ ETFs၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ - CFDs ပုံစံအားလုံး
Forex နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် AvaTrade သည်အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက် ၁:၂၀ နှင့်ဗိုလ်ကြီးများအတွက် ၁း၃၀ ကိုသြဇာသက်ရောက်စေသည်။ အကြီးစားအညွှန်းကိန်းများနှင့်ရွှေကို 1:20 မှာကန့်သတ်ထားသည်။ အစုရှယ်ယာများသည် ၁: ၅ တွင်လည်းကောင်း၊ ၁: ၂ တွင် cryptocurrencies ရှိကြသည်။
Bitcoin၊ Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin Gold, Ripple, EOS, Dash နှင့် Ethereum - Avatrade တွင်ငွေကြေးအတွဲ ၅၀ ကျော်ကမ်းလှမ်းသည်။ ဤပွဲစားကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ရုံးခန်း ၁၁ ခန်းရှိပြီး ASIC၊ FSP (တောင်အာဖရိက)၊ IIROC (ကနေဒါ) နှင့် FSA (ဂျပန်) မှလိုင်စင်များရရှိထားသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့်အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့များ၏တင်းကြပ်သောကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။
$ 100 နိမ့်ဆုံးသိုက်
ရိုးရှင်းသောအင်တာနက်ရှာဖွေမှုတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကတိပေးသောပွဲစားပလက်ဖောင်းများစွာရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်မှုအလွန်များသောပြနာမှာဂျုံစပါးကိုကောက်ပဲသီးနှံများမှခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ပွဲစားသည်အပြည့်အဝလိုင်စင်နှင့်သေချာစေရန် ASIC, FCA သို့မဟုတ် CySEC ကဲ့သို့သောလေးစားဖွယ်လိုင်စင်ရကော်မရှင်မှသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာသင်၏ငွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပွဲစားရွေးချယ်ရာတွင်အခြားအချက်တစ်ခုမှာကော်မရှင်၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ထုတ်ယူခြင်းနှင့်အပ်ငွေအခကြေးငွေများနှင့်ပြန့်ပွားမှုစသည့်သင်၏အိမ်စာကိုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သရုပ်ပြအကောင့်တွေဟာသင့်ရဲ့တကယ့်ငွေကိုအသုံးမပြုဘဲတိုက်ရိုက်စျေးကွက်အခြေအနေမှာခြေကိုရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအစမဟာဗျူဟာအသစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ASIC ပွဲစားသည်ပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ASIC (သြစတြေးလျလုံခြုံရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်) မှလိုင်စင်ရရှိထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားသည်အားလုံးအတွက်မျှတသောကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
ငါ ASIC ပွဲစားနှင့်အတူသြဇာကိုသုံးနိုင်သလား?
ဟုတ်တယ်။ ASIC ပွဲစားအများစုတွင်သင်ကသြဇာကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်၏ကန့်သတ်ချက်များသည်အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရရှိနိုင်သနည်းနောက်ဆုံးတွင်သင်ရွေးချယ်သော ASIC ပွဲစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့ပွဲစားများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအနည်းငယ်ကိုသာအာရုံစိုက်ပြီးအခြားသူများကမူနေအောက်တွင်အရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျဆင်းမယူမီဤအချက်အလက်များကိုအမြဲစစ်ဆေးပါ။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ ID မိတ္တူများကို ASIC ပွဲစားသို့ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။
အတိုတောင်းတဲ့အဖြေကတော့ဥပဒေပဲ။ ASIC 'သင်၏ဝယ်သူဖောက်သည်ကိုသိရှိရန်' စည်းမျဉ်းများအရပွဲစားကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်ဓာတ်ပုံစိတ်ကူးနှင့်စစ်ဆေးမှုများကို အသုံးပြု၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး စီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်။